उपाधिको हकदार किन क्रोएशिया ? | | Neplays.com
नेप्लेज, ३१ असार । रसिया विश्वकपको फाइनल खेल शुरु हुन अब केही घन्टा मात्रै बाँकी छ । उपाधिका लागि मस्कोस्थित लुज्निकी स्टेडियममा भिड्दैछ सन १९९८ को विजेता फ्रान्स र पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको क्रोएशिया ।
फाइनल खेल सुरु हुनु भन्दा एकै छिन नजिक बाट नियाल्यौ क्रोएशियालाई किन उपाधि ? र क्रोएशियन फुटवलको इतिहासमा आफ्नो नाम सुनौलो अक्षरले लेख्न हकदार छ त ?
चामत्कारिक, सामुहिक र अधिकतम प्रेरित टिम
प्रशिक्षक ज्लात्को डेलिचले केही अविश्वशनीय काम गरेका छन् । यस भन्दा अगाडी क्रोएशियन फुटबल टिम यस्तो राम्रो कहिल्यै थिएन् भन्ने खेलाडीको बारम्बारको आवाज हो ।
उनीहरुले यो विश्वकपमा परिवार जस्तो महशुस गरेका छन् । उनीहरुले ५० दिन संगै विताइसकेका छन् । मैदानमा गरेको कडा मेहनतले के देखाउँछ भने, उनीहरु एक अर्काका लागि मर्न पनि तयार छन् । लगातार तीन खेल अतिरिक्त समयमा पुग्दा पनि क्रोएशियन टिममा ‘जीत’को भोक उच्च देखिन्थ्यो ।
मानसिक र शारिरीक रुपमा वलियो
डेनमार्क, रसिया र इङ्ल्यान्ड तीनै खेलमा क्रोएशिया पछि परेको अवस्थाबाट खेलमा फर्किएको थियो । यस मध्य डेनमार्क र रसियासँग उसले पेनाल्टी सुटआउटमा जीत हात पारेको थियो । क्रोएशियाले सवै खेलमा जीत हात पार्दा उसको शारिरीक र मानसिक स्थिती कति वलियो छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।
कप्तान लुका मोड्रिचले भन्ने गर्छन् ‘ हाम्रो चरित्र विश्वकपका दौरान देखाएका छाैं ।’ त्यसैले त क्रोएशियन टिमको ब्यक्तिगत चरित्र फ्रान्स सँग फाइनल खेल्न सक्षम छ ।
मोड्रिच यो जेनेरेशनको नेतृत्वकर्ता हुन । रियाल मड्रिडका ‘प्लेमेकर’ बाहेक डेलिचको टिममा अरु स्टार खेलाडी पनि छन् । बार्सीलोनाका इभान राकिटिच, इन्टर मिलानका मारियो मान्डजुकिच, युभेन्टस इभान पेरिसिच र लिभरपुलका डियान लोभरेनले क्लब फुटबलमा आफूलाई सिद्ध गरिसकेका छन् । उनीहरुको औसत उमेर २७ वर्ष छ ।
क्रोएशियन टिममा अनुभन र आत्मविश्वासको कुनै कमी छैन् । प्राय सवै खेलाडी आ आफ्नो क्लबका मुख्य खेलाडी हुन् । त्यसैले अबको केहीबेरमा शुरु हुने फाइनलमा एक पटकको विजेता फ्रान्सलाई चुनौति दिँदै स्वर्णिम अक्षरले विश्व विजेताको खाताको क्रोएशिया लेख्ने हैसियत राख्दछ ।